Home TORO FARANY AFRICAN Pierre-Emerick Aubameyang tantaram-pitiavana tantanin'ny tantaram-piainana tsy hita isa
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny sariohatry ny baolina kitra izay fantatry ny olona amin'ny anarana; 'Auba'. Ny tantaram-pianakaviantsika Aubameyang momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra anarana dia mitondra anao ao amin'ny fitantarana feno momba ireo zava-nitranga mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny analizy dia mirakitra ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny maro amin'ireo zavatra tsy fantatra sy tsy fantatra momba azy. Lets Begin.
Pierre-Emerick Aubameyang tantaram-pitiavana tantanin'ny tantaram-piainana tsy hita isa -Fiainana tany am-boalohany
Pierre-Emerick Emiliano François Aubameyang dia teraka tany Laval, Frantsa tamin'ny 18th of June 1989 avy amin'ny raibeny Gabonese, Pierre François Aubameyang "Yaya", mpiaro ny baolina kitra Gabone teo aloha sy ny reniny Espaniola, Ramatoa Margarita Crespo Aubameyang, tompon-trano / orinasa vehivavy.
Aubameyang dia antsasak'adiny izay mizara ny zom-pirenena Frantsay sy Gabone. Tsy isalasalana fa hita amin'ny endriky ny hodiny ny endriky ny hazakazaka am-bavan'izy io. Tsy nandany ny fiainany nandritra ny fahazazany tany Frantsa sy Gabon izy raha mbola nitombo. Izy dia nobeazina tany Milan, Italia izay niasan'ny dadany ho toy ny scout an'ny AC Mailand.
Pierre-Emerick Aubameyang dia azo antoka fa zanaky ny manan-karena. Nahafinaritra ny traikefa nananany nandritra ny fahazazany, izay nanandratana ny maro tamin'ny taonany. Ny fananana ray mpilalao baolina kitra taloha izay toy ny mpilalao baolina kitra ho an'ny iray amin'ireo klioba lehibe indrindra eran-tany dia midika fa tombony ho an'i Auba.
Pierre-Emerick Aubameyang tantaram-pitiavana tantanin'ny tantaram-piainana tsy hita isa -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Ny rainy (sary etsy ambany) dia tompon'andraikitra amin'ny famolavolana sy fanombanana ny talenta baolina kitra any Auba. Amin'ny maha-Senior Scout AC Millan sy lehilahy iray manana fiantraikany amin'ny fifandraisana lalina amin'ny baolina kitra, dia tsy sarotra ny nanamboatra ny zanany 3 niaraka tamin'ny mpiasany.
Pierre-Emerick Aubameyang sy ny ray aman-dreny-Ny Fianakaviana
Tsara ho marihina fa i Pierre François Aubameyang fantatra ihany koa ho "Yaya" dia iray amin'ireo mpiaro indrindra an'i Afrika nandritra ny fotoana niasany tamin'ny 1982 ka hatramin'ny 2002. Izy dia nandray anjara tamin'ny ekipa iraisam-pirenana Gaboney tao amin'ny 1994 sy 1996 African Cup of Nations ary nilalao ekipa maromaro tao Frantsa. Ny nofinofiny dia ny mitaiza zanaka izay hanohy ny lova Aubameyang.
Tahaka ny Ray toa ny Zanaka- Ny Aubameyangs Aubameyang's Mum- Margarita
ny reny, Mrs Margarita Crespo Aubameyang Etsy ankilany dia nanohana foana ny fanapahan-kevitr'io lehilahy io ny fanapahan-kevitry ny zanany lahy hanaraka ny tantarany. Vehivavy frantsay izy avy amin'ny orinasa espaniola.
Ny zava-dehibe dia ny manamarika fa ny ra Espaniola ihany koa dia mandalo amin'ny lalan-dran'i Auba. Ny tanànan'i El Barraco reniny (any andrefan'i Madrid) dia nahitàna mpilalao baolina marobe marobe nandritra ny taona maro.
Pierre-Emerick Aubameyang tantaram-pitiavana tantanin'ny tantaram-piainana tsy hita isa -Lehilahy isam-pianakaviana izy
Eo amin'ny baolina kitra, 'Auba', dia lazaina ho lehilahy iray manontolo ao amin'ny fianakaviana izay tia mandany fotoana amin'ny namany Alysha sy ny zanany, Curtys izay natolony ny mpilalao Spiderman sy ny fankalazana ny batman.
Araka an'i Auba "Ny fitiavana dia zavatra tsara tarehy amin'ny endriny rehetra, fa angamba, ny fitiavan'i Alysha sy Curtys tena mistery ary matetika dia mistery ny fitiavana"
"Nanome ahy fientanam-po marina izy," hoy ilay dadatena feno fientanam-po, izay ny boots matetika no mitondra ny anaran-janany hoe "Curtys".
Ao amin'ny teniny, "Ny hany tokana ao an-tokantrano dia i Curtys zanako lahy ary samy mandinika ny Batman sy Spiderman amin'ny fahitalavitra indraindray"
Pierre-Emerick Aubameyang tantaram-pitiavana tantanin'ny tantaram-piainana tsy hita isa -Rahalahy Football
Manana rahalahy zokiny roa izay mpilalao baolina matihanina izy. Raha ny marina, telo no nanomboka ny asany tao AC Milan.
Izay tsy fantatrareo momba ireo rahalahy Aubameyang
Raha mbola nitombo i Pierre-Emerick, mbola mbola miady mafy ihany ireo hafa mba hahazo ny fankasitrahana manerantany. Ny rahalahiny lahimatoa Catilina dia Gabon iraisam-pirenena ihany koa, izay nanao fijery maro tao anatin'ny 2000s miditra, raha i Willy kosa dia iraisam-pirenena, saingy ankehitriny dia milalao amin'ny ligy ambany ambany any Alemaina.
Pierre-Emerick Aubameyang tantaram-pitiavana tantanin'ny tantaram-piainana tsy hita isa -The Boy's Dad
Tsy toy ny rahalahiny i Auba, fa tiany indrindra ny dadany. Tsy manaja azy fotsiny izy fa manaraka ny toroheviny momba ny raharaha ara-barotra sy ny fianakaviana.
Amin'ny resaka raharaham-barotra, ny fanapahan-kevitry ny baolina mahakasika ny fifampiraharahana fifanakalozana sy ny fisafidianana ny klioba dia ho an'ny dadany ambony. Hianao izay maharesy ny fahavalonao. Ohatra, nisy fotoana i Etienne naniry ny hivarotra an'i Auba ho any Newcastle. Nandà ny dadany ary nanaiky ny zanany lahy handika ny fifindra-monin'i Dortmund. Araka ny voalazan'i Auba, "Lasa finalista izahay tao amin'ny Ligy Championship satria nianatra tamin'i Jurgen Klopp ny lalao Dortmund, na dia ambany aza ny vola."
Pierre-Emerick Aubameyang tantaram-pitiavana tantanin'ny tantaram-piainana tsy hita isa -The Speed ​​Perfect
Pace no zava-dehibe ho hitanao amin'i Pierre-Emerick Aubameyang. Ny heriny lehibe indrindra. Manana haingana be izy ao anatin'ny fotoana fohy sy lava ary afaka mitondra ny baolitra tsara amin'ny fotoana iray ihany koa. Nosokafana tamin'ny metron 30 izy tao anatin'ny segondra 3.7. Nolazaina fa haingana kokoa noho ilay Tompondakan'ny Tompondakan'ny Olympika Olaimpika XnumX sy ny tompon'ny bolongana-Usain Bolt.
Na dia izany aza, dia notoavina tamin'ny hazakazaka metatra 100 avy amin'ny Julian Reus, jiolahim-boto japoney izy saingy mbola tsy nanaiky ilay fanamby.
Pierre-Emerick Aubameyang tantaram-pitiavana tantanin'ny tantaram-piainana tsy hita isa -Career aloha
Tao amin'ny 2007, dia natsangana tao amin'ny AC Milan Akademia nataon'ny dadany, ny taona dia lasa tompon-daka Eoropeana ny goavana Italiana. Tsy nanao lalao mihitsy ho an'ny Rossoneri mihitsy izy ary tsy nanamafy ny tenany ho ekipa voalohany mpilalao. Nosoloany vola ho an'ny klioba frantsay toy ny Dijon, Lille ary Monaco izy. Tao amin'ny 2011, izy dia nanao sonia ny fifanarahana maharitra nataon'i Saint Etienne izay nahazoany tanjona 31 ary nantsoina hoe Ligue 1 Afrikana tamin'ny taona ho an'ny 2012.
Nanana fiovam-baovao niova izy niaraka tamin'i Christophe Galtier mpanafika an'i Saint-Etienne. Araka ny voalazan'ny mpanazatra Frantsay,
"Na dia tsy nandeha tsara aza ny zava-drehetra ho an'i Auba tamin'ny voalohany. Nahita zavatra iray ihany aho. Izany no vitany. Nahita aho nandritra ny fiofanana fa izy no mpilalao baolina kitra haingana indrindra azoko. ",
Nandritra ny taonan'ny 20 dia nilalao ho an'ny ekipa U-21 frantsay i Pierre taorian'ny nantsoany tany amin'ny pejy U-19 Italiana. Nifindra tao Borussia Dortmond ao amin'ny 2013 ao Alemaina izy ary nipoitra ny iray amin'ireo mpitokona ambony ao amin'ny Bundesliga.He dia nanambatra ny BVB tamin'ny fifanarahana € 13 tapitrisa.
Na dia teraka tany Frantsa aza i Pierre ary nilalao ho an'i Gabon ho kapiteny mba hanohy ny lalao baolina kitra baolina kitra Aubameyang izay nataon'ilay zokiny Catalina. Faly izy ary nanaja ny fahalalan'ny zanany mikatsaka ny haka tahaka azy ireo.
Pierre-Emerick Aubameyang tantaram-pitiavana tantanin'ny tantaram-piainana tsy hita isa -Manaova tantara
Aubameyang no mpilalao Gabone voalohany voalohany hilalao amin'ny Bundesliga na any amin'ny ligy alemana hafa. Izy no nanombohany voalohany tamin'ny Aogositra 10, 2013 taorian'ny fidirana tao Dortmund tamin'ny volana Jolay tamin'io taona io ihany. Izy dia nanana ny nofin'ny nofinofy tamin'ny fanatsofohana trompetra tao amin'ny lalao voalohany, izay nilalao tamin'ny FC Augsburg.
Ao amin'ny bokin'ny tantara, Tamin'ny Jolay 2012, Aubameyang dia nandeha tany Londres mba hisolo tena an'i Gabon tamin'ny Lalao Olaimpika. Tamin'ny lalao voalohany manoloana an'i Soisa no nahavitany ny tanjon'ilay lalao, izay mety hahatonga azy ho ny tanjona tokana horaisin'i Gabon amin'ny fifaninanana. Io no tanjona voalohany sy tanjon'izy ireo tany amin'ny Lalao Olaimpika. Nahazo ny tanjona 19 i Pierre-Emerick Aubameyang no mpilalao ambony indrindra an'i Gabon.
Pierre-Emerick Aubameyang tantaram-pitiavana tantanin'ny tantaram-piainana tsy hita isa -Cars
Raha jerena ny haavom-bolo-n'i Gabon iraisam-pirenena, dia voajanahary fotsiny ny tokony hankafiziny ny fiainana ao amin'ny lalan'ny fifadian-kanina.
Ny fitiavan'i Aubameyang ho an'ny fiara fitaratra
"Mahafinaritra ny manana fiara tahaka izao," Hoy izy momba ny Aventador Lamborghini. Mety ho hita eny amin'ny kodiaran'ny fiarany ihany koa ny isa an'ny ekipa Aubameyang, na dia mitondra Lamborghini aza izao.
Pierre-Emerick Aubameyang tantaram-pitiavana tantanin'ny tantaram-piainana tsy hita isa -Wonder Boots
Matetika izy no antsoina hoe Mr Glamorous. Aubameyang dia tsy ny mpilalao amin'ny ankapobeny amin'ny elanelan'ny fisainana, indrindra raha ny momba ny akanjo.
Pierre-Emerick Aubameyang kiraro mavomavo
Tamin'ny volana 2012 tamin'ny volana desambra izy dia nanao baoty izay nanodidina ny kristaly 4,000 Swarovski sy ny famolavolana izay nahitana ny anarany, ny laharana ary ny klioba sy ny lokon'ny klioba raha nanamafy ny lalao tamin'ny Olympique Lyonnais.
Pierre-Emerick Aubameyang tantaram-pitiavana tantanin'ny tantaram-piainana tsy hita isa -Heveriny fa SPIDERMAN izy
Aubameyang dia manana traikefa teo aloha teo amin'ny fankalazana ny superhero. Ity hajaina ho an'ny Spiderman ity dia nentanin'ny zanany lahy Curtys izay mipetraka matetika eny amin'ny lampihazo mba hijery ny lalao baolina kitra. Aubameyang indray naneho fankalazana ambony iray ho an'ny zanany taorian'ny namonoana an'i Dortmund tao amin'ny 2014 Supercup nanohitra an'i Bayern.
Pierre-Emerick Aubameyang Fankalazana ny Spiderman
Ny zanany lahy dia mpankafy fanta-daza mahery fo ary tia hiseho amin'ny sarin'ny Spiderman tahaka ny dadany.
Ny Fankalazana ny Tanjon'ny Spiderman Auba
Pierre-Emerick Aubameyang tantaram-pitiavana tantanin'ny tantaram-piainana tsy hita isa -Heveriny fa BATMAN izy
Rehefa tsy mahita ny fitaovana misy ny Spiderman izy, dia nitodika tany Batman izy.
Auba's Celebration Celebration
Auba dia mpankafy be an'i Batman. Izy foana no lehilahy amin'ny fivoriam-be rehetra amin'ny fanaovana saron-doha Batman ho an'ny zanany lahy. Izany dia mitebiteby maro amin'ny zanany obsession miaraka amin'ny Knight Dark.
Pierre-Emerick Aubameyang tantaram-pitiavana tantanin'ny tantaram-piainana tsy hita isa -Voaheloka hanao akanjo mandritra ny fankalazana
Voasambotra indray i Auba noho ny fametrahana saron-tsakafo Nike nandritra ny fankalazana iray.
Voarara ny vidiny manodidina ny € 50,000. Vantany vao voamarina fa notokanana ilay saron-tsarimihetsika Nike Hypervenom Phantom "Strike Night" izay niakanjoany.
Ny lehiben'ny mpanatanteraka ao Dortmund Hans-Joachim Watzke dia nilaza tamin'ny gazety Kicker hoe: 'Tsy mety ho izany no niezahan'i Nike hanosika ny tombontsoa ara-toekarena amin'izany fomba izany.'
Pierre-Emerick Aubameyang tantaram-pitiavana tantanin'ny tantaram-piainana tsy hita isa -Fitiavana an'i Afrika
Ny tato afrikanina Auba dia mamorona ny vatany ary manatsara ny fanahiny amin'ny fitiavana ny kaontinanta.
Eny afrikanina, tsy noho izy teraka Afrikana, fa satria teraka tao aminy i Afrika.
Pierre-Emerick Aubameyang tantaram-pitiavana tantanin'ny tantaram-piainana tsy hita isa -Fitiavana fotsiny amin'ny baolina kitra
Eny, izy dia mitafy kiraro an'i Crystal, spiderman masks, Batman capes - amin'ny voalohany. Tsy isalasalana, Auba dia karazana baolina kanto manokana.
Rehefa akaiky hijery akaiky ianao dia ho hitanao fa ilay mpanafika dia tsy izay eritreretinao hoe mety ho ao ambadiky ny filalaovana izy. Araka ny naman'i Christophe akaiky Jallet,
"Aubameyang dia zazalahy mangina, izay tsy mitsidika klioba alina, tsy misotro toaka ary manonofy foana momba ny baolina kitra".
Pierre-Emerick Aubameyang tantaram-pitiavana tantanin'ny tantaram-piainana tsy hita isa -Hair Style
Auba dia tena manahy momba ny volony. Izy dia iray amin'ireo mpilalao baolina vitsy izay nandika ny faritanin'i Paul Pogba. Pierre-Emerick Aubameyang dia nametraka an'i Paul Pogba tamin'ny filazana - tsy teo amin'ny toerana, fa tamin'ny lalao volom-borona.
Ny tompon'ny chef tsara indrindra amin'ny baolina kitra
Izy no manana volo mamirapiratra indrindra amin'ny mpilalao baolina.
Pierre-Emerick Aubameyang tantaram-pitiavana tantanin'ny tantaram-piainana tsy hita isa -Summersault Master
Matetika i Miroslav Klose no nanao azy ireo, ankehitriny koa i Aubameyang. Its peaks. Pierre-Emerick Aubameyang dia nilaza Sport Bild Fantany fa ny fankalazana ny lakolosy dia "Tsy mampidi-doza" taorian'ny nanentanana ny hampitsaharana ny fikambanan'ireo mpilalao baolina kitra ao Gabon sy ny manam-pahaizana amin'ny fitsaboana
Auba- Ilay Mpitarika Somersault
Raha ny marina, i Auba dia manapa-kevitra samirery aorian'ny tanjona tsirairay na tsia, fa miezaka ny manao izany taorian'ny fitokonana tena manan-danja.
Pierre-Emerick Aubameyang tantaram-pitiavana tantanin'ny tantaram-piainana tsy hita isa -Fanajana ny Crespo
Tsy dia misy mpilalao baolina kitra eto amin'izao tontolo izao izay nanosika ny anaran'ny mpilalao baolina hafa teo an-tsandriny. Auba dia ankoatra izany.
Tatoo an'i Auba ho an'i Crespo
Aubameyang's Hero of Childhood: Hernan Crespo
Izy no mitondra ny sampy, ilay mpikomy ao Arzantina "Hernan Crespo" eo amin'ny sorany havia. Ny tatitra dia manondro fa Hernan Crespo dia mifandray amin'ny reniny izay mitondra ny anarana ihany koa. Aubameyang dia mpankafy ny tenany manokana ho an'i Hernan Crespo ary nomeny azy ho modely lehibe indrindra amin'ny lalao.
Araka ny voalazan'i Auba, "mavesa-danja ny krespo, matanjaka amin'ny rivotra, mahay manolo-tena sy goavam-be amin'ny mpilalao", hoy izy kicker. Auba dia mandany ny ankamaroan'ny fotoam-pampianarana navoakany tamin'ny fijerena ny fahaiza-mihetsik'i crespo.
Araka an'i Auba, "Crespo dia famaritana ny Poacher. Tsy dia tafiditra ao anatin'ny fananganana izy ary tsy maneho fahalianana be amin'ny firotsahana ao ambadiky ny fiarovana. Manao fihetsiketsehana kely izy rehefa mandeha ivelan'ny boaty. Nefa ao anatin'ilay boaty dia fantany ny fomba fihetsiketsika. Fantany hoe aiza ny tapakila faharoa no hifarana. Fantany ny fomba hanararaotana ny habetsaky ny habaka sisa tavela ao anatin'ny boaty 6 yd. Mianatra isan'andro aho mba ho tahaka azy. "
Pierre-Emerick Aubameyang tantaram-pitiavana tantanin'ny tantaram-piainana tsy hita isa -LifeBogger Rankings
Nankatoavinay ny antontanisa malaza ho an'i Pierre-Emmerick Aubameyang.